Raysal Wasaaraha Ethiopia oo Booqan Doona Korea – Rasaasa News
Raysal Wasaaraha Ethiopia oo Booqan Doona Korea
Nov 23, 2011 busan forum, Raysal Wasaaraha Ethiopia oo Booqan Doona Korea
Nairobi, November 23, 2011 [ras] – R/wasaaraha Ethiopia Meles Zenawi, ayaa booqasho rasmi ah oo afar maalmood ah ku tagi doona todobaadka dambe dalka Korea, ka dib kolkii uu marti qaad ka helay madaxweyne Lee Myug-bak.
Labada hogaamiye ayaa Isniinta yeelan doona kulan ay kaga wada xaajoon doonaan arimo badan oo ay ka mid yihiin iskaashiga horumarinta, ganacsiga, dhaqan isweydaarsiga iyo iskaashiga nabad galiyada, warkan ayaan ka soo xiganay wagayska The Korea Herald.
Hogaamiyaha Ethiopia ayaa Isniinta gaadhi doona dalka Korea joogina doona ilaa iyo khamiista dambe.
Madaxweyne Lee ayaa martiqaadkan fidiyey bishii July oo uu booqasho rasmi ah ku tagay dalka Ethiopia. Xiligaas oo uu Lee ka codsaday Meles in uu u joogo kulan sadex maalmood ah oo Busan talaadada ku yeelan doonaan gole heer sare ah oo la xidhiidha arimaha taaba galkinta kaalmada.
Waxaa kale oo uu R/wasaaruhu la kulmi doonaa hogaamiyeyaasha ganacsiga ee Korea maalinta talaadada, maalinta xigtana wuxuu joogi doona kulanka golaha Busan.
Stuttgart: Gudomiye Cabdirashiid Shariif oo ka Qayb Galay Kulan Caho ah
Maxaad ka Taqaan Gabalka Afdheer ee Degaanka Somalida Ethiopia?